Orinasa fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy - Mpanamboatra fanatanjahan-tena any China, mpamatsy
Ny fanatanjahan-tena an'ny lehilahy dia lohan'ny haavo antsasaky ny zip
Ny fampiasana fitaovam-pandinihana dia manatsara ny fahitana maso ny akanjo amin'ny tontolo maizimaizina, amin'izay dia azo antoka kokoa amin'ny alina
Akanjo akanjo miady amin'ny hoditra manohitra roa-epidemika an'ny lehilahy
Ity lehilahy ity dia nitafy Hoodie miaraka amin'ny saron-tava no endrika farany farany. Manify, malefaka sady mahazo aina ary manana fidiovan-drivotra tsara izy ity. Afaka mitazona hafanana sy fanoherana ny vovoka sy ny mikraoba izy.
T-Shirt fohy an'ny fanatanjahan-tena an'ny lehilahy
Dikan-teny Klasika, Maimaimpoana Hanokatra Volavola klasika sy mahazatra, mety tsara, manamboatra lamba volon-dehilahy, malefaka ary tsy misy ahiahy
Sora-tànana Mosaic Raglan Sleeve misy akanjo ba misy akanjo lava
Ity lehilahy ity dia nanamboatra an'i Hoodie fitambaran'ny lokon'ny indigo sy ny tafika an-dranomasina. Tena tsotra sy madio izy io, ny paosy kely dia mora ampiasaina, azonao atao ny mametraka lakile, telefaona ary zavatra kely hafa ao.
Tenda boribory ahazoana aina, fizotra malefaka, famolavolana volon'akanjo lava, famisavisana ny soroka koa afaka mampatsiahy ireo fiara sy mpandalo rehefa mivezivezy amin'ny alina.
Hoodie Zipper mahazatra an'ny lehilahy
Polyester Fiber + Spandex Ratio, Elasticity tsara, fanoherana mahery vaika matanjaka, fanoherana ny triatra mahery. Fanaparitahana kofehy misaintsaina eo amin'ny tratrany mba hampitomboana ny fiarovana amin'ny dia.
Akanjo hoditra Zipoitr'akanjo Zipper Volon'ondry marevaka ho an'ny lehilahy
Fiverina miverina misokatra mamolavola volom-borona mivelatra, azo tsoahina ary ahazoana miaritra ny toetr'andro mandrivotra, mamolavola satroka porofon-drivotra mba hisorohana ny rivotra tsy hiditra amin'ny hatoka rehefa manao fanatanjahan-tena na hetsika eny ivelany eny amin'ny toetr'andro mandrivotra.
Akanjo Polo Shirt fohy malefaka amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy
Ity tendrony ity dia vita avy amin'ny fanjairana mirindra. Ny endrik'ilay lobaka Polo, miaraka amina tanan'akanjo sy akanjo lava, dia manana fomba fanatanjahan-tena amin'ny fialamboly. Dingana fanodinana: fanenomana, fandokoana, famolavolana, fanapahana, zaitra ary fonosana
Taratasy fanatanjahan-tena ho an'ny fanatanjahantena an-tsehatra ho an'ny lehilahy
Taratasy fanaovana sary an-tsehatra hoodie ho an'ny lehilahy 3d Taratasy misy loko telo misy endrika telo eo amin'ny tratrany, ny novelona ary ny fampifanarahana sary miloko tsy manam-paharoa
Pataloha jogging manao fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy
Dingana fanodinana: fanenomana, fandokoana, famolavolana, fanapahana, zaitra ary fonosana
Akanjo fanatanjahan-tena mahazatra an'ny Multicolor Men
Ny aotom-panatanjahan-tena mahazatra mahazatra anay dia tena mampionona. Ity akanjo lava vita amin'ny elastika ity dia ny efitrano fisakafoanana lavorary ao an-trano fanatanjahan-tena na any an-trano. Qucik-dry ary manana fahaiza-manao ratsy .Mangataka ny mety indrindra, ny lamba ary ny vidiny izahay.
NY SORATAN'NY NYLON REHETRA NY LOHATENY FITIAVANA FANOMPOANA FOTSINY
Boardshorts, saingy tsara kokoa. Asehoy ny fikarakarana ny planeta ary koa ny fitaovanao milomano miaraka amin'ny Boardies Recycled an'ny lehilahy. Vita amin'ny nylon navaozina, akanjo milomano maharitra izy io izay toa tsara, mahatsapa tsara ary tsara.
Lamba firakotra roa sosona, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha,